Ukuphrinta kweSolder Namathisela - I-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Indlu yakwaFumax SMT inomshini wokuphrinta we-solder othomathikhi ukuze usebenzise i-solder paste kuma-strencils.
ukulawula okuqinile ekuprinteni kokunamathisela kwe-solder
Iphrinta yokunamathisela i-solder ngokuvamile yakhiwa ukulayishwa kwepuleti, ukunamathisela i-solder, ukuphrinta, nokudluliswa kwebhodi le-ircuit.
Umgomo wayo osebenzayo uthi: lungisa ibhodi lesifunda ukuthi liphrintwe etafuleni lokuma kokuphrinta, bese usebenzisa okokuphrinta kwephrinta ukuphrinta okunamathiselwe kwe-solder noma i-glue ebomvu kumaphakethe ahambisanayo nge-stencil. Isiteshi sokudlulisa sifaka kumshini wokubekwa ukuze ubekwe ngokuzenzakalela.
1. Iyini iphrinta yokunamathisela i-solder? Futhi kusebenza kanjani?
Ukuphrinta ukunamathisela i-solder ebhodini lesifunda bese uxhuma izingxenye ze-elekthronikhi ebhodini lesifunda ngokusebenzisa i-reflow kuyindlela esetshenziswa kakhulu embonini yokukhiqiza i-electronics namuhla. Ukuphrinta kokunamathisela kwe-solder kufana nokudweba odongeni. Umehluko ukuthi ukuze kusetshenziswe i-solder paste endaweni ethile futhi ilawule ngokunemba inani le-solder paste, kufanele kusetshenziswe ipuleti lensimbi elikhethekile (stencil) eliqondile. Lawula ukuphrinta kokunamathisela kwe-solder. Ngemuva kokuphrinta kokunamathisela kwe-solder, okunamathiselwe kwe-solder lapha kuklanywe ngendlela ye "田" ukuvikela isinamathiseli se-solder ukuthi singagxili kakhulu enkabeni ngemuva kokuncibilika.
2. Ukwakheka kokuphrinta kwe-solder paste
（1, Ezokuthutha System
System 2, Screen ukubeka uhlelo
System 3, PCB ukuma uhlelo
System 4, uhlelo Visual
System 5, uhlelo lokususa
Device 6, okuzenzakalelayo screen yokuhlanza idivayisi
（7, ashintshekayo ithebula ukuphrinta
3. Umsebenzi wokuphrinta kokunamathisela kwe-solder
Ukuphrinta kokunamathisela kweSolder kuyisisekelo sekhwalithi ye-solder ebhodini lesifunda, futhi isikhundla sokunamathisela kwe-solder nenani likathayela kubalulekile. Kuvame ukubonwa ukuthi unamathisela we-solder awuprintiwe kahle, okwenza i-solder ibe mfushane futhi i-solder ingenalutho.